Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA waxay soo saartay Kooxda Waxqabadka Aids Mobility Aids
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Kooxda Dhaqdhaqaaqa Aids Mobility ayaa baari doonta oo hagaajin doonta safarka gaadiidka ee qalabka gargaarka, oo ay ku jiraan kuraasta curyaamiinta, iyadoo ujeedadu tahay hagaajinta maaraynta qalabkan muhiimka u ah socotada naafada ah.
Maaddaama shirkadaha duulimaadyadu dib u dhismayaan, warshaduhu waxay u hamuun qabaan inay dhisaan dib-u-soo-celin ballaaran
Kooxda waxqabadka ayaa noqon doonta tii ugu horreysay nooceeda ah ee loogu talagalay wax ka qabashada arrimaha ku saabsan nabadgelyada iyo xasiloonida gaadiidka qalabka gargaarka.
Iyada oo ay sii kordheyso tirada dadka ku nool wadamada adduunka, socdaalayaasha naafada ah waxay noqon doonaan qeyb macaamiisha ah oo sii kordheysa ee diyaaradaha.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) waxay ku dhawaaqday daahfurka koox wax qabad oo loo yaqaan 'Mobility Aids Action Group' si ay u baaraan oo ay u hagaajiyaan safarka gaadiidka ee kaabayaasha dhaqdhaqaaqa, oo ay ku jiraan kursi curyaamiinta, iyadoo ujeedadu tahay hagaajinta maaraynta qalabkan muhiimka u ah socotada naafada ah
Kooxda waxqabadka ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee loogu talagalay wax ka qabashada arrimaha ku saabsan nabadgelyada iyo nabadgelyada gaadiidka ee qalabka gargaarka dhaqdhaqaaqa - oo ah arrin muhiimad weyn u leh tirada sii kordheysa ee socdaalka. Waxay sidoo kale siin doontaa talo iyo talooyin shirkadaha diyaaradaha iyo daneeyayaasha kale ee ku saabsan dejinta siyaasad, habraac iyo heerar la xiriira maaraynta iyo daabulida qalabka gargaarka.
“Sannad kasta, kumanaan gawaarida curyaamiinta ah ayaa si nabadgelyo ah loogu qaadaa hawada. Si kastaba ha noqotee, waxyeelo ama lumis ayaa wali dhacaya. Markay dhacdana, dhib ayey ku tahay rakaabka maadaama qalabkani ka badan yahay qalabka — waa kordhin jidhkooda waxayna muhiim u yihiin madax-bannaanidooda. Waxaan qireynaa inaanan joogin meesha aan dooneyno inaan ku jirno tan oo ah warshad ahaan. Tani waa sababta aan u dooneyno inaan wax uga qabanno heer caalami ah, ma ahan inaan sameysano dukaan lagu wada hadlo, laakiin waa inaan isku keennaa kooxaha muhiimka ah si aan u qaadno tallaabo wax ku ool ah, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Si gaar ah, Mobility Aids Action Group waxay ku lug lahaan doontaa inta badan ee daneeyayaasha ay saameysay arintan, oo ay ku jiraan ururada marin u helka (matalaya socotada naafada ah), shirkadaha diyaaradaha, shirkadaha bixiya adeegyada dhulka, garoomada diyaaradaha iyo soo saarayaasha qalabka gargaarka. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee soo-saaraha qalabka gargaarka dhaqdhaqaaqa lagu casuumo inuu kaqeybqaato hawl-qabadka IATA.
“Tani waa bilowga maalin cusub oo bulshada marin-u-helku ay kursi ku leedahay miiska. Caqabada daabulida qalabka caawinta ayaa wajaheysa shirkadaha duulimaadyada ee daafaha dunida iyadoo IATA ay sameyso kooxdan waxqabadka ah waxay muujineysaa sida ay uga go'an tahay warshada inay xalliso mid ka mid ah mowduucyada marin u helka ugu weyn, ”ayuu yiri Eric Lipp, Aasaasaha iyo Agaasimaha Fulinta ee Ururka Albaabada Furan (ODO) .